Buyaas News - Anabolics Steroids Nsukka
Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Anavar (Oxandrolone) maka Bodybuilding
Kedu ihe bụ Anavar (Oxandrolone)? Oxandrolone (53-39-4), nke a na-ere n'okpuru aha aha Oxandrin na Anavar, n'etiti ndị ọzọ, bụ ọgwụ orrogen na anabolic steroid (AAS) nke eji enyere aka n'ịkwalite uru bara uru n'ọnọdụ dị iche iche, iji nyere aka gbochie protein catabolism kpatara ọgwụgwọ corticosteroid ogologo oge, iji kwado mgbake site na ọkụ ọkụ, iji mesoo ọnyá ọkpụkpụ aka na osteoporosis, iji nyere aka n'ịzụlite ...
Trenbolone Enanthate na Trenbolone Acetate (Kedu onye na-enweta mmeri?)
Kedu ihe bụ Trenbolone enanthate? Na otu o si arụ ọrụ? Trenbolone enanthate (10161-35-8) na Trenbolone acetate (10161-34-9) bụ abụọ n'ime ọgwụ ndị na-emekarị na anabolic etrogenic. The Trenbolone Enanthate na Trenbolone Acetate utịp bụ fọrọ nke nta ka otu. Ihe dị iche na-abịa na oge onye ọ bụla ga-ewepụ ntọala Trenbolone na-arụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ha na-ada n'ụzọ yiri nke ahụ, Trenbolone Enanthate na ...
Masteron Propionate ma ọ bụ Masteron Enanthate? Kedu nke kaara gị mma?
Kedu ihe bụ Masteron Propionate (Drostanolone Propionate)? Masteron Propionate (521-12-0) na Masteron Enanthate (472-61-1) dị iche na Masteron na obere ihe dị iche. Ha na-ejikọta ha ma bụrụ ndị a na-ahụkarị n'etiti bodybuilders. Ihe dị iche n'etiti ha abụọ bụ nchịkwa usoro ọgwụgwọ na ọkara ndụ ha. Masteron Propionate dosage dị ntakịrị mana e nyere kwa ụbọchị ebe ọ bụ na ọgwụ na-arụ ngwa ngwa ma na-ekpuchi ...